Eo am-pitendrena i Torkia…. Miresaka sakafo sy ireo mpianatra any Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2019 3:56 GMT
Herinandro mangingina tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Tiorka, nangina ireo bilaogera sasany ankafiziko tahaka an'i Turkish Torque sy Talk Turkey. Na izany aza, navitrika tsy nisy toy izany kosa i Mavi Boncuk sy Erkan ao amin'ny Field Diary.
Nahasarika izao tontolo izao ny fitsarana an'i Orhan Pamuk, mpamorona tantara Tiorka noho izy naneho hevitra manohitra ny Repoblikan'i Torkia. Erkan ao amin'ny Field Diary manome antsika fihetseham-po fohy momba ny raharaha Orhan Pamuk, ary manana sary misy ireo polisy misahana ny rotaka tao ivelan'ny efi-pitsarana nanaovana ny fotoam-pitsarana azy.
Mavi Boncuk nandefa andiana rohy misy ireo nahandro navoakan'ny bilaoginy hatramin'ny nanombohan'ny bilaoginy, ary koa manao dokambarotra ny bilaoginy ara-tsakafo manokana, Tastes of Mavi Boncuk.
Misy ny fizarana fandraketam-peo (podcast) vaovao ataon'i Kevin sy Fatma Take On the World, ary ahenoana an'i Fatma tamin'ity indray mitoraka ity! Ny bilaogy Mp3, Unomundo indray tamin'ity herinandro ity, mifantoka amin'ny mozika hip hop.
Socioeconomics nanana eritreritra tampoka momba ny horonantsary King Kong. Ignore Me If You Can manoratra ny horonantsary hitany vao haingana, mitondra ny lohateny hoe Havoc. Manoratra momba ny varotra amin'ny krismasy sy ny tambaovao any Istanbul ihany koa izy, lohahevitra izay noresahany tao amin'ny Metroblogging:Istanbul ihany koa. Phanja avy ao amin'ny The Need to Know manambara fa haka “fialan-tsasatra fety” izy.
Yogurtland manana lahatsoratra momba ny fanaovana fanasana sy fisaorana amin'ny mariazy, sy ahandro ho an'ny Strained Yogurt Cake, izay ampiasaiko ho an'ny iray amin'ireo tetikasako farany amin'ity telo volana ity, ary tiako hanomezana ny fisaorako ihany koa!
Zava-baovao ho an'ity herinandro ity ny bilaogy Tiorka amin'ny teny Anglisy, antsoina hoe Ne Var, New York?, kilalaon'ny teny hoe “Ne Var, Ne Yok” (ara-bakiteny hoe, inona no ao, inona no tsy ao) ny lohateny, izay tenin-jatovo tiorka mitovy amin'ny hoe “inona ny vaovao?”.
Hita tamin'ity herinandro ity ihany koa ny bilaogy Queen of Flub, mpianatra Tiorka Amerikana ao amin'ny MIT izy, izay ao anatin'ny dingana farany amin'ny famaranam-pianarana any amin'ny oniversite tahaka ny maro amintsika. Mandika araka ny tokony ho izy ny lahatsoratra Tiorka ho amin'ny teny Anglisy i Mert Ulas, Tiorka mpianatry ny oniversite any Etazonia, na dia sahirana amin'ny fiafaran'ny enim-bolana aza izy, na izany aza, milaza izany rehetra izany ny lahatsorany farany amin'ny teny Tiorka.